Famokarana dika flexo napetraka napetraka ao Turkey - DH Flexo Printing
Vao haingana, nisy milina fanontam-pirinty DH-FP (modely DH-FP) nampiasaina tamin'ny DH-FP nampiasaina tsara tao Torkia. Ny milina dia ampiasaina indrindra amin'ny famokarana sari-tanan'ny sigara sy ny vokatra hafa.
dc label f ​​printing flexo fp
Ny modelin'ny FP dia tetikasam-pifaneraseran'ny tranokala mavitrika izay nampidirin'ny DH ho an'ny tsena fanontam-pirinty nandritra ny taona vitsy lasa. Ny tetikasa fanorenana vaovao dia natao mba hahazoana antoka fa ny rafitry ny milina dia tsotra sy azo itokisana, miorina amin'ny fandidiana ary azo ekena amin'ny vidiny, izay ampiasaina amin'ny labels papiers sy ny labels etiketsika.
Ny maodely FP dia mampiasa fiara tsy miankina servo moto isaky ny gara, fisoratana anarana mandeha ho azy, mialoha fisoratana anarana, fidirana amin'ny Internet ary asa hafa azo ampiasaina, miaraka amin'ny rafi-by sy ny fantsom-pifamoivoizana, ny stamping mangatsiaka, ny laminaty ary ny asa hafa, afaka mihaona amin'ireo mpampiasa pirinty 'ny ankamaroan'ny filan'ny asa.
Noho ny fahatakarana marina ny fangataham-barotra, dia nalaza tsara ny modely FP hatramin'ny nanombohany ary nahomby tamin'ny fametrahana azy tany amin'ny firenena maro.
← Ahoana ny fomba hisorohana ny olana amin'ny bubble air amin'ny fanontana pirinty
Masinina fanontana flexo haingam-pandeha DH-ROC vaovao natolotra ny mpanjifa →